कमजोर महशुस भयो ? यी खानेकुराले बढाउँछ प्रतिरक्षा शक्ति,जानेर सियर गर्नुहोस ! – Latest News, Video, Entertainment,Health
रगतमा डब्लुबिसीको मात्रा कम हुँदा कमजोर महशुस हुने गर्दछ । रिंगटा लाग्ने, खान मन नलाग्ने, आलश्यता बढी हुने, जिउ पुरै शिथिल तथा गलित हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिरक्षा शक्ति बढाउने खानेकुरा खानुपर्छ । प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हुँदा विभिन्न रोग लाग्ने खतरा बढी हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन शरीरमा डब्लुबिसीको मात्रा पर्याप्त हुनुपर्छ । जसका लागि नियमित यी कुराहरु खानाले शरीरमा डब्लुबिसीको कमी हुन पाउँदैन–
लसुन, अदुवा –खानामा दैनिक लसुन र अदुवाको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । यी दुवैमा डब्लुबिसी अर्थात् शरीरको रोग–प्रतिरोधक क्षमता बढाउने तत्व हुन्छ । अदुवाले शरीरमा इन्फ्लेमेसन घटाउन पनि सघाउँछ ।
बदाम –बदाम प्रोटिन र मिनरल्सको राम्रो स्रोत हो । दैनिक ८–१० दाना बदाम खानाले प्रतिरक्षा प्रणाली बजबुत राख्न मद्दत पुग्छ ।
बेसार-तरकारीमा बेसारको प्रयोग रंग र स्वादका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बेसारले हामीलाई ओस्टियोपोरोसिस (हड्डीको कमजोरी), ब्लड प्रेसरजस्ता विभिन्न रोगबाट बचाउँछ । बेसारमा हुने कर्क्युमिन तत्व एक राम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट हो । यसले शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति बढाउँछ ।
अमिला फल –सबैजसो अमिला फलमा भिटामिन सी पाइन्छ । भिटामिन सीले शरीरमा डब्लुबिसीको मात्रा बढाउन मद्दत गर्छ । यसबाट शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ ।
खाँदा तीतो भए पनि करेला स्वास्थ्यका लागि अति लाभदायक
धरैलाइ मन नपर्ने खाँदा तीतो भए पनि करेला स्वास्थ्यका लागि अति लाभदायक हुन्छ । तीतो कतिपयलाई मन नपर्न पनि सक्छ तर करेला तीतो भए पनि महत्त्वपूर्ण औषधि सरह नै भूमिका निर्बाह गर्छ । तीते करेला स्वास्थ्यका लागि निक्कै फाइदाजनक हुन्छ। नियमित करेला सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरमा देखिने विभिन्न खालका समस्याबाट हामी बच्न सक्छौ।
यस्ता छन् करेला सेवन गर्नुका फाइदाहरु
-बान्ता, हैजा आदि भएमा करेलाको रसमा थोरै पानी र कालो नुन छरेर खाने गरेमा तुरुन्त लाभ मिल्छ ।
-करेलाले पाचन शक्ति बलियो बनाउँछ र भोक जगाउँछ ।
-करेला खाने गर्नाले रगत सफा गर्ने मात्र नभएर हेमोग्लोबिनको मात्रा पनि बढाउन मदत गर्छ ।
-दमको समस्या भएकाहरूले मसला नहालीकन पकाएको करेलाको तरकारी खानु राम्रो हुन्छ ।
-कलेजोसम्बन्धी समस्या भएकाहरूका लागि पनि करेलाको तरकारी ज्यादै उपयोगी हुन्छ ।
-डायबेटिजको समस्या भएकाहरूका लागि करेलाको तरकारी उत्तम मानिन्छ । यसले शरीरमा चिनीको मात्रालाई नियन्त्रित गर्छ ।
-बाथ रोग भएमा अथवा हातखुट्टा पोल्ने गरेमा काँचो करेलाको झोलले मालिस गरेमा फाइदा पुग्छ ।
← उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अन घोडा चढेर हिमालको टुप्पामा
यस्तो आकारको अनुहार भएका महिलाहरु हुन्छन् संसारकै भाग्यमानी! हेर्नुहोस कतै तपाइ मा छ कि !! →
September 12, 2019 September 12, 2019 Info-Kantipur 0
रक्सी सेवनका कारण घट्दैछ औसत आयु
September 5, 2019 September 5, 2019 Info-Kantipur 0